Blog Shop - Myanmar Blogshop - Dior Dream Skin
ဒီတခေါက်တော့ Dior Skin Care အသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ friends တို့ရေ။
နာမည်လေးကတော့ Dior Dream Skin လေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ Dior Capture Totale skin care စီးရီးထဲမှ ဖြစ်ပါတယ်။ Dream Skin လေးဟာ နာမည်နဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာပဲ အိပ်မက်မင်းသမီးလေး မျက်နှာမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးအားဖြင့် ပထမအကြိမ်စသုံးရုံနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကို သိသာထင်ရှားစွာ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dream Skin လေးကိုလိမ်းပီးလျှင် makeup လိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပီးသည့်နောက်တွင်တနေ့တာလုံး မျက်နှာလေးမှာ အိပ်မက်မင်းသမီးလေးအလားနုပျိုလှပနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချွေးပေါက်များကျဉ်းသွားပီး အဆီမပြန်ပဲ တင်းတင်းရင်းရင်းလေးနဲ့လှပနေပီး မိမိကိုယ်ကို တနေကုန်ယုံကြည်မှုရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်အကြာမှာတော့ မျက်နှာတခုလုံးတိုးတက်လှပမှုဟာ ၉၀%အထိတွေ့မြင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ 30ml = 170S$ (158,000 Ks.)
Dream Skin လေးကိုအသုံးပြုပုံလေးကိုပါ friends တို့အတွက် share ပေးထားပါတယ်။ ပုလဲလုံးလေးတစေ့စာလေးနဲ့ တနေကုန်လှပရအောင်နော်။
လိုအပ်လို့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ ☏ 09450230788 ကို ဖုန်းဆက်ပီး ✉ SMS ပေးပို့ပြီးမှာယူနိုင်ပါပြီး၇ှင် ☑ အိမ်တိုင်ရာရောက်လည်းပို့ ပေးပါတယ်။ အပိုထပ်ဆောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
☑ နယ်မှမှာယူလိုသူများကားဂိတ်ထိပို့ပေးပါတယ်။ အပိုထပ်ဆောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
စင်ကာပူ Dior ကောင်တာမှ တိုက်ရိုက်တင်ပို့ပေးသောတခြားသော cosmetics, skin care များ နှင့် တခြားသော Branded ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို ပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ေ၇ာင်းချပေးနေသော page လေးကတော့ https://www.facebook.com/The-Best-Seller-In-Singapore-591113581027148/
Payment Method Cash/ Bank
Delivery Method Pick up or Delivery
The Best Seller In Singapore
Total Products: (12)
No.82, 3rd Floor, Koun Ywe Tann (Upper Block) Kyi Myin Tai Township, Yangon. (11101)
Price: MMK 158,000
Category: Beauty & Sports
Total View: 1433